Saraakiil sare oo lagu dilay dagaalka Guriceel ee maanta iyo wararkii ugu dambeeyey - Caasimada Online
Home Warar Saraakiil sare oo lagu dilay dagaalka Guriceel ee maanta iyo wararkii ugu...
Saraakiil sare oo lagu dilay dagaalka Guriceel ee maanta iyo wararkii ugu dambeeyey
Guriceel (Caasimada Online) – Wararkii ugu dambeeyey ee aan ka heleyno magaalada Guriceel waxay tilmaamayaan in khasaare badan uu dhashay dagaalkii maanta, isla markaana aan weli aan dhinac looga adkaan dagaalka, oo caawa xaafadaha qaar ee magaalada ay difaac uga jiraan ciidamada Ahlu-Sunna.
Dagaalkii maanta ayaa galaaftay ciidamo iyo saraakiil labada dhinacba ah, waxaana la xaqiijiyey in galabta uu dhaawac soo gaaray u geeriyooday Taliyihii ciidanka booliska gaarka ah ee Haramcad Faarax Muumin.
Sarkaalkaan ayaa xalay loo magacaabay hoggaanka ciidanka Haramcad ee Galmudug ku sugan, kadib markii dagaalkii shalay uu dhaawac culus ka soo gaaray Taliyihii Haramcad ee Galmudug.
Sidoo kale Cabdulqaadir Maxamed Diiriye oo ahaa taliyihii Nabad sugidda garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb iyo askar kale ayaa lagu dilay dagaalkii maanta.
Waxaa caawa fiidkii soo gaaray dagaal culus oo dhanka waqooyi ee magaalada ka qarxay maanta duhurkii, kaas oo bilaawday wax yar kadib markii uu soo baxay war sheegayey in Ahlu-Sunna ay dalbatay xabad joojin si magaalada ay uga baxaan.
Guddoomiyaha degmada Guriceel Aanas Cabdi Macalin oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa qiray in Ahlu-Sunna ay maanta dalbatay xabad joojin, balse waxuu ku eedeeyey in ayagu ay jebiyeen xabad joojinta oo qiyaano ay ka wateen dalabkaas.
Sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in go’doon ay geliyeen ciidamada u dagaalamaya Ahlu-Sunna, isla markaana ay ku raja weyn yihiin in dhawaan ay soo afjaraan iska caabintooda, isagoo balan qaaday inay ka aqbali doonaan baxad joojin ama xal aan xabad aheyn hadii ay la yimaadaan.
Ciidamada labada dhinac ayaa aad ugu jabay dagaalkaas labada maalmood ka socda magaalada Guriceel, waxaana dhaawacyada ciidamada dowladda loo kala daabulay Muqdisho iyo Dhuusamareeb.
Hase yeeshee Ahlu-Sunna waxaa weli ku adag inay goobo caafimaad u hesho dhaawacyada ciidankeeda kasoo gaaraya dagaalka, dhaawacyo iyo meydad badan ayaana la soo sheegayaa inay dhex yaalaan goobaha ay dhufeysyada uga jiraan.
Maanta waxaa lasoo bandhigay sawirrada seddax ka mid ah saraakiishii ugu sareysay ciidanka Ahlu-Sunna oo dhaawac ah, iyagoo ku jira isbitaal ku yaalla magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, kuwaas oo ciidanka Danad oo fadhigoodu yahay duleedka ay kala baxeen isbitaalka.
Wararkii u dambeeyey waxay sheegayaan in ciidanka Ahlu-Sunna ay caawa ku sugan xarumo badan oo ay kamid yihiin xarunta Beder 2, Jaamacadda, Iskuulka Al-Maamuun, koontoroolka Guriceel ee xiga dhinaca Dhuusamareeb iyo guud ahaan jihada waqooyi ee magaalada.
Ciidamada dowladda ayaa caawa ku sugan goobo ay kamid yihiin saldhiga booliska dhismaha Beder 1, xarunta Hormuud iyo guud ahaan xaafadaha koonfureed ee magaalada, waxaana caawa la kala joogaa goobihii la kala joogay xalay, taas oo muujineysa in dhinacyadu aysan wax horumar ah ka sameyn dagaalka.